စိန့်ဘာနာ့ဒ်စီရင်စုတွင်ရှိသည့်ဟာရီကိန်းလီလီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် subtitles October 01, 2020
WE ငါတို့ ငါတို့ဖြစ်နိုင်သည် ကျနော်တို့အာရုံစူးစိုက်စေခြင်းငှါ ကျနော်တို့အာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ဖြစ်နိုင်သည် ငါတို့တစ် ဦး အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါသည် ကျနော်တို့အနည်းငယ်အာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ ကျနော်တို့အနည်းငယ်အာရုံစိုက်နိုင်မိနစ်အနည်းငယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်။ အားလုံး မိနစ်အနည်းငယ်။ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ အသံ ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းသားပဲ။ ကောင်းသားပဲ။ ကောင်းသားပဲ။ NOW ကောင်းသားပဲ။ NOW TO သို့ ကောင်းသားပဲ။ NOW က TO တစ် ဦး ကောင်းသားပဲ။ အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင် ကောင်းသားပဲ။ အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ချိုးဖောက်မှု အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ချိုးဖောက်မှု အခုကျရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခုကျရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အခုတော့ရေလွှမ်းမိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ယခုရေလွှမ်းမိုးမှုတွင်နှိမ်နင်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုယခုပြုလုပ်ပါ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ST တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခြင်း။ ST တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခြင်း။ BERNARD ST တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခြင်း။ Bernard စီရင်စုနယ်။ ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကို ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကိုပါဝင်ပတ်သက် ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကို Ring ကိုပါဝင်ပတ်သက် ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကို RING LEVE များပါဝင်သည် ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကိုတွင်လက်ဝဲငှားရမ်းပါဝင်သည် ဒီနည်းကိုတွင်လက်ဝဲငှားရမ်းပါဝင်သည် ဒီနည်းကိုတွင်လက်စွပ်ကွင်း၌ပါဝငျ ဒီနည်းကိုသစ်သား၌ Ring Ring များပါဝင်သည် ဒီနည်းကိုသစ်သားခုတ်ရာမှာ RING LEVE တွေပါပါတယ် ဒီနည်းကို WOOD LAKE DELACROIX မှာ RING LEVE တွေပါ ၀ င်သည် ဒီနည်းကို WOOD LAKE DELACROIX INရိယာထဲမှာ RING LEVE တွေပါ ၀ င်သည်။ THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ ပေါလု THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ ပေါလ်မာဖီ THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ Paul MURPHY ရှိခဲ့ပါတယ် THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ ပေါလု MURPHY ရှိခဲ့ပါတယ် THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ Paul MURPHY ပုံပြင် THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ Paul MURPHY အတွက်ပုံပြင် Paul MURPHY အတွက်ပုံပြင် Paul MURPHY သည်နေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်များရှိသည် Paul MURPHY သည်ယခုနေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည် PAUL MURPHY သည်ယခုနေ့ရက်ကာလ၌ပါဝင်နေသည် Paul MURPHY သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းသည့်နေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည် Paul MURPHY သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောနေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ် အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်၊ အိုင်တီ အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်, အိုင်တီ IS အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလု, အိုင်တီတစ် ဦး အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်, ဒါဟာအစွမ်းထက် IS ပေါလ်, ဒါဟာအစွမ်းထက် IS ပေါလ်သည်အလွန်အန္တရာယ်များသည် ပေါလ်သည်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည် ပေါလ်သည်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည် ပေါလ်သည် ST ၌အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ BERNARD ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ Bernard စီရင်စုနယ် ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ ယနေ့ည Bernard စီရင်စု ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကယနေ့ည Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကယနေ့ည Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သည်ယနေ့ညမတိုင်မီ BERNARD ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ယနေ့ညမတိုင်မီလေကြောင်းခရီးစဉ် BERNARD စီရင်စုတွင်ယနေ့ညလေကြောင်းတိုက်မတိုင်မီ BERNARD စီရင်စုနယ်သည်ယနေ့ညမတိုင်မီလေကြောင်းခရီးစဉ် ၅ တွင် BERNARD စီရင်စုနယ်ယနေ့ညမတိုင်မီလေကြောင်းခရီးစဉ်5စီရင်စုတွင် AT5စီရင်စုကို AT လေကြောင်းမီ လေယာဉ်မထွက်ခွာမီပါလီမန်သမ္မတ ၅ ခုမတိုင်မှီ လေယာဉ်မထွက်ခွာမီပါလီမန်သမ္မတ၏ကောင်လေး ၅ ခု AIRTIME မတိုင်မှီ5စီရင်စုနယ်သမ္မတသမ္မတ GUY MCGINN AIRTIME မတိုင်မှီ5စီရင်စုနယ်သမ္မတသမ္မတ GUY MCGINN IS လေယာဉ်မထွက်ခွာမီပါလီမန်စီရင်စုနယ်သမ္မတ ၅ ကောင်မလေး MCGINN ကိုခေါ်သည် သမ္မတ GUY MCGINN ခေါ်သည် သမ္မတ GUY MCGINN ငါ့ကိုခေါ်တယ် သမ္မတ GUY MCGINN ကိုခေါ်တယ် သမ္မတ GUG MCGINN ကိုကျွန်မခေါ်ပြီးပြောပြတယ် သမ္မတ GUY MCGINN ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပြတယ် သမ္မတ GUY MCGINN ငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့အားပြောပြသည် သမ္မတ GUG MCGINN ကငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကငါ့ကိုပြောပြတယ် သမ္မတ GUG MCGINN ကကျွန်မကိုခေါ်ပြီးစီးရီးအကြောင်းပြောပြတယ် သမ္မတ GUG MCGINN ကကျွန်မကိုခေါ်ပြီးစီးရီးအကြောင်းပြောပြတယ် ငါ့ကိုနှင့်တစ် ဦး စီးရီးငါ့ကိုပြောပြတယ် ငါ့ကိုလက်စွပ်တစ်ကွင်းကပြောပြတယ် ငါ့ကိုလက်ျာဘက်၏စီးရီးပြောပြတယ် ငါ့ကိုလက်စွပ်တစ်စီးရီးသောငါ့ကိုပြောပြတယ်သော ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့ကြ Ring Ring ၏စီးရီး ငါ့ကိုနှင့်လက်စွပ်၏စီးရီး PROTECT မှကူညီပေးသည်ငှားရမ်းခွင့်ကပြောကြားခဲ့သည် ကာကွယ်ပေးသည်လက်စွပ် ကာကွယ်ပေးသောလက်စွပ် ကူညီပေးခဲ့သောလက်စွပ်များသည်သစ်သားကိုကာကွယ်ပေးသည် ကူညီပေးခဲ့သောလက်ျာချောင်းများသည်ရေကန်ကိုကာကွယ်သည် ကူညီပေးသောလက်စွပ်များရေကန်ကန်နှင့် ကူညီပေးခဲ့သည့်လက်စွပ်များသည်ရေကန်နှင့်ဒေသန္တရသစ်တောများကိုကာကွယ်ပေးသည် ကူညီပေးခဲ့သည့်ကြိုးတန်းများကရေကန်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာAရိယာများကိုကာကွယ်ပေးသည် THE Wood Lake နှင့်ဒေသဆိုင်ရာREရိယာ သစ်တောနှင့်ဒေသခံREရိယာရှိသည် သစ်တောနှင့်ဒေသဆိုင်ရာNရိယာယခုပင်ရှိသည် သစ်တောနှင့်ဒေသဆိုင်ရာREရိယာယခုပင်ဖြစ်ပြီ သစ်တောနှင့်ဒေသဆိုင်ရာREရိယာယခုကျော်သွားပြီ Wood Lake နှင့်ဒေသခံBYရိယာယခုကျော်သွားပြီ အခုဆိုရင်ကျော်သွားပြီ ဒီနည်းကိုကျော်လွှားခဲ့ကြပါပြီ ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအားဖြင့်ကျော်လွှားခဲ့ကြပြီ ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်နေပြီ။ ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> ASSOCIATE ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> နှင့်ဆက်ဆံပါ ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> Hurricane နှင့်အတူပေါင်းသင်း >> Hurricane နှင့်အတူပေါင်းသင်း >> Hurricane Sally နှင့်အတူ။ Sally ။ Sally ။ AND Sally ။ AND သော Sally ။ နှင့်ဆက်ဆက်သော Sally ။ AND ဆက်ဆက်ရှုပ်ထွေး AND ဆက်ဆက်ရှုပ်ထွေး နှင့်ဆက်ပြောသည်သောရှုပ်ထွေး နှင့်သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုရှုပ်ထွေး နှင့်သောရေလွှမ်းမိုးရန်ပွဲကိုဆက်တိုက်ရှုပ်ထွေး နှင့်သောရေလွှမ်းမိုးယနေ့ညတိုက်ပွဲတွေရှုပ်ထွေး AND သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းယနေ့ညဉ့်တိုက်တိုဒီမှာရှုပ်ထွေး သောရေလွှမ်းမိုးယနေ့ညတိုက်။ ဒီမှာ သောရေလွှမ်းမိုးယနေ့ညတိုက်။ ဒီမှာ သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းယနေ့ညဒီမှာတိုက်! သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းယနေ့ညဒီမှာတိုက်! BERNARD ။ ST ၌ BERNARD ။ ST ၌ BERNARD ။ >> ST ၌ BERNARD ။ >> THE ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ် ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်ဖုန်း ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယို ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက် >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက် >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်ပဲ >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်ထဲမှာပဲ >> THE ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်ထဲမှာ >> နောက်ဆုံးဆဲလ်အတွင်းရှိဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက် >> နောက်ဆုံးဆဲလ်အတွင်းရှိဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက် >> နောက်ဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအတွင်းရှိဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက် နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြပွဲထဲမှာ နောက်ဆုံးသောနောက်ဆုံးနာရီအတွင်းရေလွှမ်းမိုးသည် နောက်ဆုံးသောနောက်ဆုံးနာရီအတွင်းရေလွှမ်းမိုးနေသည် နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းမှာပြထားတဲ့ရေကြီးမှု နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းပြသပါကရေအောက်၌ရေစီးဆင်းသည် နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းတွင်ရေအောက်ရေစီးစီးဆင်းနေသည်ကိုပြသည် ခြေထောက်ပေါ်စီးဆင်းသောရေလွှမ်းမိုးခြင်း တစ် ဦး ကအကြောင်းစီးဆင်းရေလွှမ်းမိုး တစ် ဦး အကြောင်းတစ် ဦး အကြောင်းစီးဆင်းရေလွှမ်းမိုး အကွာအဝေးတစ်လျှောက်အကြောင်းရေစီးဆင်းမှု အကွာအဝေးတစ်လျှောက်တွင်ရေစီးဆင်းနေသောရေစီးသည် DELLA လူစုလူဝေး၏ DOW CROWE HIGHWAY အရခြေထောက်တစ်လျှောက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း အကွာအဝေးတစ်လျှောက်အကွာအဝေးတွင်ရေစီးဆင်းနေသောရေကြောင်းသည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သည့်လမ်းကြောင်းများ ကုန်ပစ္စည်းကျော်သည်အဝေးပြေးလမ်းမ အရှေ့ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမအကွာအဝေး အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ BERNARD အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ Bernard စီရင်စုနယ် အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ Bernard စီရင်စုနှောင်းပိုင်း အရှေ့ ST ။ Bernard စီရင်စုနှောင်းပိုင်း အရှေ့ ST ။ Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ဒီနေ့နှောင်းပိုင်း အရှေ့ ST ။ နေ့လည်ခင်း BERNARD ဒီနေ့နှောင်းပိုင်း အရှေ့ ST ။ BERNARD စီရင်စုတစ်စုကဒီနေ့နှောင်းပိုင်း အရှေ့ ST ။ BERNARD စီရင်စုတစ်စုပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနှောင်းပိုင်းတွင်ခိုင်မာတဲ့ အရှေ့ ST ။ BERNARD ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်နိမိတ်ပြီးနောက်နေ့လည်ခင်း၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မုန်တိုင်း နေ့လည်ခင်း၌ဒီနည်းကိုအားကြီးသောမုန်တိုင်း ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုတစ်အားကြီးသောမုန်တိုင်းထန် နေ့ပြီးနောက်ဒီနည်းကနေခိုင်မာတဲ့မုန်တိုင်းထိတ်လန့် နေ့ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းကနေခိုင်မာတဲ့မုန်တိုင်းထိတ်လန့် ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုတစ်ရာသီလုံးသဲသောင်ကနေခိုင်မာတဲ့မုန်တိုင်းထိတ်လန့် Hurry ထံမှ SURGE Hurric RANDHURY OF SURGE ရီရီ SURGE မှ SURGE ထဲသို့တဟုန်တည်းပြေး SANDY ထံမှ SURGE SANDY အလျင်အမြန်ပြေး SURY OF SURGE RANDED ထဲသို့ယူ။ ယူ SURYR ထံမှ SURGE Rush ထဲသို့ယူ။ ထဲကယူ SANDY ထံမှ SURGE SANDY အလျင်အမြန်နှင့်ထဲကယူ အလျင်အမြန်နှင့်ထဲကယူ စီးအလျင်အမြန်စီးရီးထဲကယူ ထဲသို့အလျင်အမြန်ပြေး၏စီးရီး အလျင်အမြန် RING စီးရီးထဲကယူ အလျင်အမြန်ပြေးနှင့်ကွင်းလေယာဉ်စီးရီးထဲကယူ သို့အလျင်အမြန်ပြေးနှင့်ကွင်း၏စီးရီးထဲကယူ RING LEVEES စီးရီး ထောက်ပံ့ပေးသော RING LEVE စီးရီး အချို့သောထောက်ပံ့ပေးသော RING LEVE စီးရီး အချို့အကာအကွယ်ပေးသောကွင်းလေယာဉ်စီးရီး အချို့အကာအကွယ်ပေးပေးသောကြိုး၏စီးရီး အချို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသော Ring လေယာဉ်စီးရီး တချို့ရဲ့ကာကွယ်မှုပေး ကန်အချို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ ကန် DELACROIX ၏အချို့ကာကွယ်မှုကိုပေးပါ ကန် DELACROIX TOရိယာများအတွက်အချို့ကာကွယ်မှုပေး ကန်တော်ကြီး Delacroix ဒေသများရှိအချို့သောကာကွယ်မှုများကိုပေးအပ်ပါ LAKE Delacroix REရိယာစီရင်စုနယ် LAKE DELACROIX စီရင်စုနယ်ခေါင်းဆောင်များ LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များ LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များ LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များကိုဆန်းစစ်ရန် LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များကိုဆန်းစစ်ရန် အကဲဖြတ်ဖို့ ဦး ဆောင်Aရိယာ ခေါင်းဆောင်များသည်ပျက်စီးမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ပျက်စီးခြင်း။ ပျက်စီးခြင်း။ >> ပျက်စီးခြင်း။ >> သင် ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်လိုအပ်ပါတယ် ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်တစ် ဦး မြင့်မားလိုအပ်ပါတယ် ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်မြင့်မားသောရေလိုအပ်ပါတယ် >> သင်မြင့်မားသောရေလိုအပ်ပါတယ် >> သင်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည် >> သင်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည် >> သင်ရရှိရန်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည် >> သင်လှည့်ပတ်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်ပါတယ် >> သင်ပတ်ပတ်လည်အစိတ်အပိုင်းများရရန်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည် >> သင်အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရှိရန်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည် ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်သို့ယာဉ် ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ BERNARD ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ Bernard စီရင်စုနယ် ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ အပြင်ဘက် BERNARD စီရင်စုနယ် ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ အပြင်ဘက်မှာခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ် ST ။ အပြင်ဘက်မှာခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ် ST ။ Lever အပြင်ဘက်မှာ BERNARD စီရင်စု ST ။ Lever ကာကွယ်ရေးအပြင်ဘက် BERNARD စီရင်စု ST ။ တနင်္လာနေ့တွင်လေဒီယိုပြင်ပပြင်ပရှိ BERNARD အင်္ဂါနေ့လေဝိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး မွန်းလွဲပိုင်းတွင်လေကြောင်းကာကွယ်မှုနေ့လည်။ နေ့လည် နေ့လည် THE နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်း နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်းမလည်း နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလည်းရေလွှမ်း နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလည်းထွက်ရေလွှမ်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလည်းထွက်ရေလွှမ်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေလည်းရေလွှမ်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်လည်းမီးဖိုချောင်မှထွက်လာသည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်မီးဖိုချောင်မှစီးထွက်လာသည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်စည်ပင်သာယာမှ HOPEDALE သို့စီးထွက်ခဲ့သည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်စည်ပင်သာယာမှ HOPEDALE သို့လည်းကောင်း၊ FLOURISANT မှ HOPEDALE သို့၎င်း၊ FLOURISANT မှသည် HOPEDALE သို့၎င်း၊ FLOURISANT မှ HOPEDALE သို့သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေ။ Shell ကမ်းခြေ။ Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ BERNARD Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ Bernard စီရင်စုနယ် Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ BERNARD စီရင်စုနယ် ST ။ BERNARD စီရင်စုနယ် ST ။ BERNARD စီရင်စု GUY ST ။ BERNARD စီရင်စု GUY MCGINNIS ST ။ Bernard စီရင်စု GUY MCGINNIS ပြောဆိုသည် ST ။ Bernard စီရင်စုနယ်ဥက္ကဌ GUY MCGINNIS ကဆိုသည် ST ။ Bernard စီရင်စုနယ်ဥက္ကဌ GUY MCGINNIS အိုင်တီကြည့်သည်ဟုဆိုသည် ST ။ BERNARD စီရင်စုနယ် GUY MCGINNIS အိုင်တီကဲ့သို့ပုံရသည် GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အလား GUY MCGINNIS အိုင်တီဆိုသူ SALLY ကဲ့သို့ပင်ကြည့်နိုင်သည် GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရာသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ပုံစံဖြစ်သည် GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရာသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသောအခြေအနေကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည် GUY MCGINNIS အိုင်တီဆိုသည့်အရာသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်လှိုင်းထန်ပုံလိုပင်ဖြစ်သည် GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရာသည်အလွန်ပြင်းထန်သောလှိုင်းလုံးကြီးကဲ့သို့ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်လိမ့်မည် GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရ SALY Storm Surge မြင့်တက်မည့်ပုံရသည် Sally Storm Surge ထွက်ပေါ်လိမ့်မည် Sally Storm Surge ထွက်ပေါ်လိမ့်မည် Sally Storm SURGE သည်အမြင့်ဆုံးရောက်လိမ့်မည် SALLY STORM SURGE ခုနစ်ခုတွင်အမြင့်ဆုံးလိမ့်မည် Sally Storm Surge သည်ခုနစ်ပေခန့်အကွာတွင်ရှိသည် SALY STORM SURGE မတိုင်မှီခုနစ်ခုမြောက်ခြေမချမီတွင်ရှိလိမ့်မည် ရှေ့တော်၌ခုနစ်ခြေမတိုင်မီ မစတင်မီခုနစ်ခုမြောက်ခြေထောက်တွင်မဖြည့်မီ ယနေ့ညမတိုင်မီခုနစ်ပါးသောခြေထောက်တွင်ယနေ့ည။ ယနေ့ည။ ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ရေ ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ရေနိုင် ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ရေကိုကပ်နိုင်သည် ဒါပေမဲ့ရေကိုကပ်နိုင်သည် သို့သော်ရေလှည့်ပတ်လှည့်ပတ်နိုင်ဘူး သို့သော်ရေလှည့်ပတ်လှည့်ပတ်နိုင်ဘူး သို့သော်ရေသည်ရက်များတစ်လျှောက်ဝန်းရံထားသည်။ နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ WE နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ကြှနျုပျတို့လုပျနိုငျမညျ နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ငါတို့နေမှာပါ နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ကျနော်တို့ဆဲလိမ့်မည် နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည် နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်တီကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်တီကဲ့သို့ကြည့်ရှုမည်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်တီအမြင့်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီရေဒီယိုကဲ့သို့သောပုံပေါ်လိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်ရှိလိမ့်မည် ဒီရေကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမည် ဒီရေအမြင့်ဆုံးဒီရေကဲ့သို့ကြည့်လိမ့်မည် ဒီရေဒီယိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်ခန့်မှန်းကြည့်ပါလိမ့်မယ် ဒီရေဒီယိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ဒီရေအမြင့်ဆုံးဒီပုံကိုကြည့်ပြီးဒီနေရာမှာသုံးခုလောက်ရှိနေမှာပါ ဒီရေသည်မြင့်သောဒီရေကဲ့သို့ပင်သုံးနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကြည့်မည် ဖြစ်ကောင်းသုံးပတ်ပတ်လည် AND သုံးယောက်နှင့်တစ်ဝိုက်ဖြစ်နိုင်သည် သုံးယောက်နှင့်တစ်ဝက်ခန့်ဖြစ်နိုင်သည် သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်တစ်ဝက်ခြေ သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်တစ်ဝက်ခြေအဘို့ သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်တစ် ဦး အတွက်တစ်ဝက်ခြေမ သုံးယောက်ခန့်နှင့်တစ် ဦး အတွက်တစ်ဝက်ခြေတစ်ဖက် သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်ရက်ပေါင်းများစွာတစ်ဝက်ခြေမ စုံတွဲတစ်ရက်တစ်ဝက်ခြေထောက် မတိုင်မီရက်ပေါင်းများစွာအတွက်တစ်နာရီဝက် ဒီနေ့မတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွက်တစ်ဝက်အစာ ဒီရေမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွက်တစ်ဝက်ခြေတစ်ဖက် ဒီရေကိုမတတ်နိုင်မီရက်ပေါင်းများစွာအတွက်တစ်နာရီဝက်ပေ ဤရေသည်မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်တစ်ဝက်ခြေထောက် ဒီရေကနစ်မြုပ်မခံရမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်ဝက်တစ်ခွက် ဒီရေမနုပ်မီ ဒီရေမနုပ်မီ ဒီရေမနုပ်မီ ဒီရေမနုပ်မီဒီမှာ။ ထဲကဒီမှာ။ ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီ ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံ ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံမူတည် ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံမူတည် ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီ့မူတည် ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည် အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည် ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည် အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်မူတည်။ မည်မျှမြန် အိုင်တီလျင်မြန်စွာအိုင်တီလျင်မြန်စွာဘယ်လိုမူတည်အိုင်တီ အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်အိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့ အိုင်တီလျင်မြန်စွာအိုင်တီသို့ပြောင်းရွှေ့ဘယ်လိုမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာ ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ မရှိ ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာပေါ်လာပါဘူး ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာပေါ်လာပါဘူး ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာပေါ်လာဖို့မသွားဘူး ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အများကြီးဖြစ်ဖို့မပေါ်ခဲ့ဘူး အများကြီးဖြစ်ဖို့မပေါ်ခဲ့ဘူး အများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့မပေါ်ခဲ့ပါဘူး အများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးစေခြင်းငှါမပေါ်ခဲ့ပါဘူး အများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးယိုယွင်းဖို့မထင်ရှားပါဘူး ST ၌ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာပျက်စီးခြင်းကိုမတွေ့ရပါ။ ST ၌ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာပျက်စီးခြင်းကိုမတွေ့ရပါ။ BERNARD ST တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးခြင်း BERNARD ST တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးခြင်း BERNARD ။ ။ ။ လူထု ။ WHO က ။ အသက်ရှင်သော WHO က ။ အပြင်မှာနေတဲ့ WHO ကလူ ။ အပြင်မှာနေထိုင် WHO က အပြင်မှာနေထိုင် WHO က အပြင်ဘက်မှာနေတဲ့ WHO ကလူ အပြင်ဘက်မှာနေတဲ့ WHO ကလူတွေ အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများသည် LEVEE PROTECTION KNOW အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများသည်သိထားသည့် LEVEE PROTECTION အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများသည်ရွှေ့ပြောင်းရမည်ကိုသိထားသည် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ KNOW LEVEE ကာကွယ်မှု LEVEE PROTEZZJONI သည်၎င်းတို့ကိုရွှေ့ရန်သိသည် LEVEE PROTEZZJONI သည်သူတို့၏တန်ဖိုးများကိုရွေ့လျားရန်သိသည် LEVEE PROTEZZJONI သည်သူတို့၏တန်ဖိုးများကိုရွေ့လျားရန်သိသည် LEVEE PROTEZZJONI သည်သူတို့၏တန်ဖိုးများကိုပိုမိုမြင့်မားစေရန်ရွေ့လျားသည် ပိုမိုမြင့်မားဖို့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားမြေသို့၎င်းတို့၏တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားမြေသို့၎င်းတို့၏တန်ဖိုးများနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောမြေပြင်နှင့်လှေများ၎င်းတို့၏တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားသောမြေပြင်နှင့်လှေများ၎င်းတို့၏တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားသောမြေပြင်နှင့်လုံခြုံရန်လှေများ၎င်းတို့၏တန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားသောမြေကြီးနှင့်၎င်းတို့၏လုံခြုံမှုရှိသောဆိပ်ကမ်းမှလှေများအတွက်၎င်းတို့၏တန်ဖိုး ဆိပ်ကမ်းမှလုံခြုံရန်မြေနှင့်လှေ ဆိပ်ကမ်းမှလုံခြုံရန်မြေနှင့်လှေ။ ။ ။ အများဆုံး ။ အများစု ။ အများစု ။ အိမ်များဆုံး ။ အိမ်အများစုမှာ ။ အိမ်အများစုသည်လည်း အိမ်အများစုသည်လည်း အိမ်အများစုသည်လည်းထမြောက်ကြသည်။ ထခဲ့သည် ထခဲ့သည် ပင် ထခဲ့သည် သော်လည်း ထခဲ့သည် Sally သျောလညျး ထခဲ့သည် OU တောင်မှထင်ပါတယ် ထခဲ့သည် OU S S S ။ ။ ။ ။ EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV S THOU THOU THOU TH S SOU SALLALLALL S SALLALLALLALLALLALLALLALL ALLALL TH ALL EVALL ALLALLALL ALLALL S S ALL ALLALL S S ALL ALLALL ALL S ALL ALLALL ALLALL ALL S ALL S S ISALL ALL S ALL S ALL S OU S ALL S ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL SALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL SALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL S S ALL S IS S IS S IS S ALL S ALL SALL ယခုပင်လျှင်ဆောင်ရွက်ရမည် OU S S S ။ ။ ။ ။ EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV S THOU THOU THOU TH S SOU SALLALLALL S SALLALLALLALLALLALLALLALL ALLALL TH ALL EVALL ALLALLALL ALLALL S S ALL ALLALL S S ALL ALLALL ALL S ALL ALLALL ALLALL ALL S ALL S S ISALL ALL S ALL S ALL S OU S ALL S ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL SALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL SALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL S S ALL S IS S IS S IS S ALL S ALL SALL ယခုပင်လျှင်ဆောင်ရွက်ရမည် ယခုပင်လျှင် SALLY ယခုမျှော်လင့်ထား ယခုပင်လျှင် SALLY ယခုမျှော်လင့်ထား ယခုပင်လျှင် SALLY ယခုပင်မျှော်လင့်ပါတယ် ယခုပင် SALLY ယခုပင်မျှော်လင့်နိုင် LANDFALL ယခုပင်အနည်းငယ်သာ LANDFALL အနီးတွင်ရှိရန်မျှော်လင့်နေကြသည် အနီးဆုံး LANDFALL စေရန်မျှော်လင့် အနီးရှိ LANDFALL စေရန်မျှော်လင့် FLORIDA အနီးတွင် LANDFALL လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထား FLORIDA Alabama အနီး LANDFALL လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထား FLORIDA ALABAMA LINE အနီးတွင် LANDFALL ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ FLORIDA ALABAMA LINE အနီးတွင် LANDFALL ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်သည် FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီ FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီရှိခဲ့ပါတယ် FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီခဲ့သည် FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီအလွန်ဖြစ်ခဲ့သည် ဖလိုရီဒါအလက်ဇန္ဒား LINE, အိုင်တီအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ဖလိုရီဒါအလက်ဇန္ဒား LINE သည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် THE အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ဒေသခံဒေသခံများအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ဒေသခံစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ဒေသခံစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်း ဒေသခံစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း။ စက်မှုလုပ်ငန်း။ စက်မှုလုပ်ငန်း။ က စက်မှုလုပ်ငန်း။ Shrimp စက်မှုလုပ်ငန်း။ Shrimp ရာသီ စက်မှုလုပ်ငန်း။ SHRIMP ရာသီငါ စက်မှုလုပ်ငန်း။ ငါနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ Shrimp ရာသီ ငါနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ Shrimp ရာသီ သင်တို့ကိုငါနားလည်သောရေမွှေးရာသီ ငါနားလည်တဲ့ရေပုစွန်ရာသီ သင်၌နားလည်မှုအနိမ့်ဆုံးရာသီ ငါနားလည်တဲ့ရေပုလင်းတစ်ချောင်း ငါနားလည်တဲ့ရေတိုဆောင်းရာသီသင့်မှာကောင်းမွန်ပါတယ် ငါကောင်းတဲ့ရာသီရှိတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်တဲ့နိမ့်ကျတဲ့ရာသီ။ သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ THE သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်း သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီ သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီ သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီဥတုသည်အဆင်းလှသည် သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီသည်အလွန်ကောင်းသည် ကဏန်းရာသီသည်အလွန်ကောင်းသည် ကဏန်းရာသီသည်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုဖြစ်သည်။ ရာသီ။ ရာသီ။ မင်း ရာသီ။ သင်ရုံ ရာသီ။ သင်ရုံမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ရာသီ။ သင်ရုံပုံရိပ်ယောင် ရာသီ။ သင်မည်သို့အိုင်တီမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ရာသီ။ သင်ရုံအိုင်တီဘယ်လိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သင်ရုံအိုင်တီဘယ်လိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သင်ရုံဘယ်လိုပိတ်ထားပုံကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ သူတို့ဘယ်လိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ သူတို့့ပုံကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သူတို့ရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးဘယ်လိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ် သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပိတ်ထားသည် သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည် ချ AND ချ AND အဆင့် ချ AND LEVEES ချ AND LEVEES ချ AND THE သစ်သားသစ်သား ချ AND THE သစ်သားရေကန်ထဲမှာလေ ချ AND THE Woodwood Lake Delices THE Wood Lake Delices ရှိငှားရမ်း Wood ကကန် Delicto INရိယာထဲမှာလေ တောင်ကုန်း Delicto INရိယာထဲမှာလေ တောင်ကုန်း Delicto INရိယာ၌သစ်တောယခုပင်ရှိသည် ဒီရေကန်ကန် Delicto DELရိယာ၌လေယာဉ်အခုအချိန်မှာပါပြီ Woodwood Lake Delices ရှိငှားရမ်းခများယခုထက်ကျော်လွန်သွားပြီ အခုအချိန်မှာကျော်သွားပြီREရိယာ အခုအချိန်မှာကျော်သွားပြီBYရိယာ BY အခုဆိုရင်နေရာOရိယာကျော်ဖြတ် ယခုအချိန်တွင်ရိယာမုန်တိုင်းထန်နေပြီ အခုအချိန်မှာOရိယာမုန်တိုင်းထန်သော SURGE အားဖြင့် OCရိယာယခုအချိန်တွင်ကျော်လွှားပြီမုန်တိုင်းဒီရေလှိုင်းများက ဆက်နွယ်နေသောမုန်တိုင်း Surge BY နှင့်ပေါင်းသင်းသောမုန်တိုင်း Surge BY အပူချိန် SURRICANE ဖြင့်ဖွဲ့စည်း Sally SURRICANE နှင့်အတူဆက်နွယ်နေသောမုန်တိုင်း Surge အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ Sally Hurricane အတူ။ Sally Hurricane အတူ။ >> Sally Hurricane အတူ။ >> AND Sally Hurricane အတူ။ >> AND WE Sally Hurricane အတူ။ >> AND WE့Sally Hurricane အတူ။ >> AND ငါတို့ပဲမြင် Sally Hurricane အတူ။ >> AND ကျနော်တို့့တစ် ဦး ကိုမြင် Sally Hurricane အတူ။ >> AND ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်တစင်းကိုမြင် >> AND ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်တစင်းကိုမြင် >> AND ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းပဲမြင် >> AND ကျနော်တို့ပဲရဟတ်ယာဉ်ကိုမြင်ပျံသန်း overhead ။ ကျော်ပျံသန်း။ ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီ ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီရှိခဲ့သည် ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ်ခုလုံးရှိခဲ့ပါတယ် ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ် ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ် ဦး စလုံးပြည်နယ်နှင့်ရှိခဲ့ပါတယ် ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရှိခဲ့ပါတယ် အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရှိခဲ့ပါတယ် အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရုံးများရှိသည် အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရုံးများရှိခဲ့ပါတယ် အိုင်တီနှစ်ခုလုံးတွင်နိုင်ငံပိုင်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာရုံးများရှိသည် အိုင်တီနှစ်ခုလုံးတွင်စီးဆင်းနေသောပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာရုံးများရှိသည် အိုင်တီနှစ်ခုလုံးတွင်စီးဆင်းနေသောပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာရုံးများရှိသည် ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများ အဲဒီမှာကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများ ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများအဲဒီမှာ ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများယူအဲဒီမှာ ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများတစ် ဦး ကယူအဲဒီမှာ ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများတစ် ဦး ကြည့်ရှုရန် ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများကြည့်ရှုရန် AND ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများတစ် ဦး ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့ ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့ရှိပါတယ် တစ် ဦး ကိုကြည့်ယူ။ အကဲဖြတ် တစ် ဦး ကိုကြည့်ယူ။ ပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ရန်။ ပျက်စီးခြင်း။ ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့ ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကောင်လေး ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, THE ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, THE ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, စီရင်စု ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, စီရင်စုနယ်သမ္မတ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတကပြောကြားခဲ့သည် ဒါပေမယ့်အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတကဒီမှာပြောခဲ့တယ် Parish သမ္မတဒီမှာပြောခဲ့တယ် Parish သမ္မတဒီမှာအမေရိကန်ကိုးကားပြောကြားခဲ့သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတကဒီမှာပြောခဲ့တယ် Parish သမ္မတဒီမှာအမေရိကန်ကိုးကားအိုင်တီကြည့်သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ဥက္ကUS္ဌကအိုင်တီနဲ့တူတယ်
<text sub="clublinks" start="3.37" dur="0.066">WE</text>
<text sub="clublinks" start="3.436" dur="0.067"> ငါတို့</text>
<text sub="clublinks" start="3.503" dur="0.167"> ငါတို့ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.067"> ကျနော်တို့အာရုံစူးစိုက်စေခြင်းငှါ</text>
<text sub="clublinks" start="3.737" dur="0.1"> ကျနော်တို့အာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ</text>
<text sub="clublinks" start="3.837" dur="0.066"> ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.234"> ငါတို့တစ် ဦး အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.167"> ကျနော်တို့အနည်းငယ်အာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ</text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.1"> ကျနော်တို့အနည်းငယ်အာရုံစိုက်နိုင်မိနစ်အနည်းငယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="4.404" dur="0.233"> မိနစ်အနည်းငယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.101"> မိနစ်အနည်းငယ်။ အားလုံး</text>
<text sub="clublinks" start="4.738" dur="0.1"> မိနစ်အနည်းငယ်။ ကောင်းပါပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.233"> ကောင်းပါပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.1"> ကောင်းပါပြီ။ အသံ</text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.1"> ကောင်းပါပြီ။ ကောင်းသားပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="5.271" dur="0.201"> ကောင်းသားပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.033"> ကောင်းသားပဲ။ NOW</text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.067"> ကောင်းသားပဲ။ NOW TO သို့</text>
<text sub="clublinks" start="5.572" dur="0.1"> ကောင်းသားပဲ။ NOW က TO တစ် ဦး</text>
<text sub="clublinks" start="5.672" dur="1.601"> ကောင်းသားပဲ။ အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်</text>
<text sub="clublinks" start="7.273" dur="0.067"> ကောင်းသားပဲ။ အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ချိုးဖောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="7.34" dur="0.334"> အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ချိုးဖောက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="7.674" dur="0.067"> အခုကျရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.066"> အခုကျရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်</text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.1"> အခုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.101"> အခုတော့ရေလွှမ်းမိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> ယခုရေလွှမ်းမိုးမှုတွင်နှိမ်နင်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုယခုပြုလုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.167"> ရေလွှမ်းမိုးခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.067"> ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="8.308" dur="0.133"> ST တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခြင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="8.441" dur="0.134"> ST တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခြင်း။ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="8.575" dur="0.1"> ST တွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခြင်း။ Bernard စီရင်စုနယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="8.675" dur="0.2"> ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="8.875" dur="2.469"> ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကို</text>
<text sub="clublinks" start="11.344" dur="0.1"> ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကိုပါဝင်ပတ်သက်</text>
<text sub="clublinks" start="11.444" dur="0.134"> ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကို Ring ကိုပါဝင်ပတ်သက်</text>
<text sub="clublinks" start="11.578" dur="0.1"> ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကို RING LEVE များပါဝင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="11.678" dur="0.067"> ST ၌ Bernard စီရင်စုနယ်။ ဒီနည်းကိုတွင်လက်ဝဲငှားရမ်းပါဝင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.166"> ဒီနည်းကိုတွင်လက်ဝဲငှားရမ်းပါဝင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="11.911" dur="0.101"> ဒီနည်းကိုတွင်လက်စွပ်ကွင်း၌ပါဝငျ</text>
<text sub="clublinks" start="12.012" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုသစ်သား၌ Ring Ring များပါဝင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.166"> ဒီနည်းကိုသစ်သားခုတ်ရာမှာ RING LEVE တွေပါပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.101"> ဒီနည်းကို WOOD LAKE DELACROIX မှာ RING LEVE တွေပါ ၀ င်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.1"> ဒီနည်းကို WOOD LAKE DELACROIX INရိယာထဲမှာ RING LEVE တွေပါ ၀ င်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="0.2"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။</text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.133"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ ပေါလု</text>
<text sub="clublinks" start="12.812" dur="2.603"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ ပေါလ်မာဖီ</text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.067"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ Paul MURPHY ရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="15.482" dur="0.1"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ ပေါလု MURPHY ရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="15.582" dur="0.133"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ Paul MURPHY ပုံပြင်</text>
<text sub="clublinks" start="15.715" dur="0.067"> THE Wood Lake Delacroix Aရိယာ။ Paul MURPHY အတွက်ပုံပြင်</text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.2"> Paul MURPHY အတွက်ပုံပြင်</text>
<text sub="clublinks" start="15.982" dur="0.067"> Paul MURPHY သည်နေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်များရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.1"> Paul MURPHY သည်ယခုနေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.067"> PAUL MURPHY သည်ယခုနေ့ရက်ကာလ၌ပါဝင်နေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="16.216" dur="0.1"> Paul MURPHY သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းသည့်နေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.133"> Paul MURPHY သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောနေ့များအတွက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="3.103"> အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။</text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.234"> အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်</text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.067"> အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်၊ အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="19.853" dur="0.1"> အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်, အိုင်တီ IS</text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.2"> အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလု, အိုင်တီတစ် ဦး</text>
<text sub="clublinks" start="20.153" dur="0.067"> အခုအချိန်မှာငါတို့အသက်ရှင်သန်နေပြီယနေ့။ ပေါလ်, ဒါဟာအစွမ်းထက် IS</text>
<text sub="clublinks" start="20.22" dur="0.267"> ပေါလ်, ဒါဟာအစွမ်းထက် IS</text>
<text sub="clublinks" start="20.487" dur="3.136"> ပေါလ်သည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်</text>
<text sub="clublinks" start="23.623" dur="0.1"> ပေါလ်သည်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="23.723" dur="0.1"> ပေါလ်သည်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="23.823" dur="0.067"> ပေါလ်သည် ST ၌အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="23.89" dur="0.267"> ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ</text>
<text sub="clublinks" start="24.157" dur="0.133"> ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="24.29" dur="0.134"> ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ Bernard စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.1"> ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ ယနေ့ည Bernard စီရင်စု</text>
<text sub="clublinks" start="24.524" dur="0.067"> ST ၌အန္တရာယ်များသောအခြေအနေ Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကယနေ့ည</text>
<text sub="clublinks" start="24.591" dur="0.233"> Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကယနေ့ည</text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.134"> Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သည်ယနေ့ညမတိုင်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.067"> BERNARD ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ယနေ့ညမတိုင်မီလေကြောင်းခရီးစဉ်</text>
<text sub="clublinks" start="25.025" dur="2.736"> BERNARD စီရင်စုတွင်ယနေ့ညလေကြောင်းတိုက်မတိုင်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.133"> BERNARD စီရင်စုနယ်သည်ယနေ့ညမတိုင်မီလေကြောင်းခရီးစဉ် ၅ တွင်</text>
<text sub="clublinks" start="27.894" dur="0.067"> BERNARD စီရင်စုနယ်ယနေ့ညမတိုင်မီလေကြောင်းခရီးစဉ်5စီရင်စုတွင် AT</text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.3">5စီရင်စုကို AT လေကြောင်းမီ</text>
<text sub="clublinks" start="28.261" dur="0.067"> လေယာဉ်မထွက်ခွာမီပါလီမန်သမ္မတ ၅ ခုမတိုင်မှီ</text>
<text sub="clublinks" start="28.328" dur="0.133"> လေယာဉ်မထွက်ခွာမီပါလီမန်သမ္မတ၏ကောင်လေး ၅ ခု</text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="0.067"> AIRTIME မတိုင်မှီ5စီရင်စုနယ်သမ္မတသမ္မတ GUY MCGINN</text>
<text sub="clublinks" start="28.528" dur="0.133"> AIRTIME မတိုင်မှီ5စီရင်စုနယ်သမ္မတသမ္မတ GUY MCGINN IS</text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.067"> လေယာဉ်မထွက်ခွာမီပါလီမန်စီရင်စုနယ်သမ္မတ ၅ ကောင်မလေး MCGINN ကိုခေါ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.167"> သမ္မတ GUY MCGINN ခေါ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.067"> သမ္မတ GUY MCGINN ငါ့ကိုခေါ်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="28.962" dur="0.1"> သမ္မတ GUY MCGINN ကိုခေါ်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="29.062" dur="0.067"> သမ္မတ GUG MCGINN ကိုကျွန်မခေါ်ပြီးပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.1"> သမ္မတ GUY MCGINN ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.033"> သမ္မတ GUY MCGINN ငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့အားပြောပြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="29.262" dur="3.437"> သမ္မတ GUG MCGINN ကငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကငါ့ကိုပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="32.699" dur="0.067"> သမ္မတ GUG MCGINN ကကျွန်မကိုခေါ်ပြီးစီးရီးအကြောင်းပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="32.766" dur="0.066"> သမ္မတ GUG MCGINN ကကျွန်မကိုခေါ်ပြီးစီးရီးအကြောင်းပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="32.832" dur="0.201"> ငါ့ကိုနှင့်တစ် ဦး စီးရီးငါ့ကိုပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ငါ့ကိုလက်စွပ်တစ်ကွင်းကပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> ငါ့ကိုလက်ျာဘက်၏စီးရီးပြောပြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.134"> ငါ့ကိုလက်စွပ်တစ်စီးရီးသောငါ့ကိုပြောပြတယ်သော</text>
<text sub="clublinks" start="33.4" dur="0.133"> ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့ကြ Ring Ring ၏စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="33.533" dur="0.067"> ငါ့ကိုနှင့်လက်စွပ်၏စီးရီး PROTECT မှကူညီပေးသည်ငှားရမ်းခွင့်ကပြောကြားခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="33.6" dur="0.2"> ကာကွယ်ပေးသည်လက်စွပ်</text>
<text sub="clublinks" start="33.8" dur="0.1"> ကာကွယ်ပေးသောလက်စွပ်</text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.1"> ကူညီပေးခဲ့သောလက်စွပ်များသည်သစ်သားကိုကာကွယ်ပေးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="34" dur="2.736"> ကူညီပေးခဲ့သောလက်ျာချောင်းများသည်ရေကန်ကိုကာကွယ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="36.736" dur="0.1"> ကူညီပေးသောလက်စွပ်များရေကန်ကန်နှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="36.836" dur="0.1"> ကူညီပေးခဲ့သည့်လက်စွပ်များသည်ရေကန်နှင့်ဒေသန္တရသစ်တောများကိုကာကွယ်ပေးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="36.936" dur="0.067"> ကူညီပေးခဲ့သည့်ကြိုးတန်းများကရေကန်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာAရိယာများကိုကာကွယ်ပေးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.2"> THE Wood Lake နှင့်ဒေသဆိုင်ရာREရိယာ</text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.067"> သစ်တောနှင့်ဒေသခံREရိယာရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.27" dur="0.1"> သစ်တောနှင့်ဒေသဆိုင်ရာNရိယာယခုပင်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="37.37" dur="0.2"> သစ်တောနှင့်ဒေသဆိုင်ရာREရိယာယခုပင်ဖြစ်ပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="0.067"> သစ်တောနှင့်ဒေသဆိုင်ရာREရိယာယခုကျော်သွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="37.637" dur="0.067"> Wood Lake နှင့်ဒေသခံBYရိယာယခုကျော်သွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="37.704" dur="0.2"> အခုဆိုရင်ကျော်သွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုကျော်လွှားခဲ့ကြပါပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုအားဖြင့်ကျော်လွှားခဲ့ကြပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="38.104" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်နေပြီ။</text>
<text sub="clublinks" start="38.204" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။</text>
<text sub="clublinks" start="38.371" dur="2.603"> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >></text>
<text sub="clublinks" start="40.974" dur="0.133"> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> ASSOCIATE</text>
<text sub="clublinks" start="41.107" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> နှင့်ဆက်ဆံပါ</text>
<text sub="clublinks" start="41.274" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းထန်။ >> Hurricane နှင့်အတူပေါင်းသင်း</text>
<text sub="clublinks" start="41.341" dur="0.233"> >> Hurricane နှင့်အတူပေါင်းသင်း</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.1"> >> Hurricane Sally နှင့်အတူ။</text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.201"> Sally ။</text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.1"> Sally ။ AND</text>
<text sub="clublinks" start="41.975" dur="0.167"> Sally ။ AND သော</text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> Sally ။ နှင့်ဆက်ဆက်သော</text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> Sally ။ AND ဆက်ဆက်ရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="1.601"> AND ဆက်ဆက်ရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="0.167"> နှင့်ဆက်ပြောသည်သောရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="44.177" dur="0.1"> နှင့်သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="44.277" dur="0.134"> နှင့်သောရေလွှမ်းမိုးရန်ပွဲကိုဆက်တိုက်ရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="44.411" dur="0.1"> နှင့်သောရေလွှမ်းမိုးယနေ့ညတိုက်ပွဲတွေရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="44.511" dur="0.066"> AND သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းယနေ့ညဉ့်တိုက်တိုဒီမှာရှုပ်ထွေး</text>
<text sub="clublinks" start="44.577" dur="0.167"> သောရေလွှမ်းမိုးယနေ့ညတိုက်။ ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.067"> သောရေလွှမ်းမိုးယနေ့ညတိုက်။ ဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="4.271"> သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းယနေ့ညဒီမှာတိုက်!</text>
<text sub="clublinks" start="49.082" dur="0.167"> သောရေလွှမ်းမိုးခြင်းယနေ့ညဒီမှာတိုက်! BERNARD ။</text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.167"> ST ၌ BERNARD ။</text>
<text sub="clublinks" start="49.416" dur="0.066"> ST ၌ BERNARD ။ >></text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.134"> ST ၌ BERNARD ။ >> THE</text>
<text sub="clublinks" start="49.616" dur="0.1"> ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်</text>
<text sub="clublinks" start="49.716" dur="0.133"> ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်ဖုန်း</text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.1"> ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယို</text>
<text sub="clublinks" start="49.949" dur="0.067"> ST ၌ BERNARD ။ >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်</text>
<text sub="clublinks" start="50.016" dur="0.2"> >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်</text>
<text sub="clublinks" start="50.216" dur="0.134"> >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်ပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.067"> >> ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်ထဲမှာပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="50.417" dur="0.1"> >> THE ဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်ထဲမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="50.517" dur="0.1"> >> နောက်ဆုံးဆဲလ်အတွင်းရှိဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်</text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.1"> >> နောက်ဆုံးဆဲလ်အတွင်းရှိဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်</text>
<text sub="clublinks" start="50.717" dur="0.067"> >> နောက်ဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအတွင်းရှိဆဲလ်ဖုန်းဗီဒီယိုရိုက်ချက်</text>
<text sub="clublinks" start="50.784" dur="2.369"> နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြပွဲထဲမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="53.153" dur="0.133"> နောက်ဆုံးသောနောက်ဆုံးနာရီအတွင်းရေလွှမ်းမိုးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="53.286" dur="0.1"> နောက်ဆုံးသောနောက်ဆုံးနာရီအတွင်းရေလွှမ်းမိုးနေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="53.386" dur="0.067"> နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းမှာပြထားတဲ့ရေကြီးမှု</text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.1"> နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းပြသပါကရေအောက်၌ရေစီးဆင်းသည်</text>
<text sub="clublinks" start="53.553" dur="0.067"> နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းတွင်ရေအောက်ရေစီးစီးဆင်းနေသည်ကိုပြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="53.62" dur="0.2"> ခြေထောက်ပေါ်စီးဆင်းသောရေလွှမ်းမိုးခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="53.82" dur="0.067"> တစ် ဦး ကအကြောင်းစီးဆင်းရေလွှမ်းမိုး</text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> တစ် ဦး အကြောင်းတစ် ဦး အကြောင်းစီးဆင်းရေလွှမ်းမိုး</text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.1"> အကွာအဝေးတစ်လျှောက်အကြောင်းရေစီးဆင်းမှု</text>
<text sub="clublinks" start="54.087" dur="0.133"> အကွာအဝေးတစ်လျှောက်တွင်ရေစီးဆင်းနေသောရေစီးသည် DELLA လူစုလူဝေး၏</text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> DOW CROWE HIGHWAY အရခြေထောက်တစ်လျှောက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.067"> အကွာအဝေးတစ်လျှောက်အကွာအဝေးတွင်ရေစီးဆင်းနေသောရေကြောင်းသည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သည့်လမ်းကြောင်းများ</text>
<text sub="clublinks" start="54.354" dur="0.267"> ကုန်ပစ္စည်းကျော်သည်အဝေးပြေးလမ်းမ</text>
<text sub="clublinks" start="54.621" dur="0.066"> အရှေ့ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမအကွာအဝေး</text>
<text sub="clublinks" start="54.687" dur="0.134"> အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="54.821" dur="0.133"> အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="54.954" dur="2.336"> အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ Bernard စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="57.29" dur="0.067"> အရှေ့တောင်ဘက်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကုန်သည်များဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ Bernard စီရင်စုနှောင်းပိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="57.357" dur="0.2"> အရှေ့ ST ။ Bernard စီရင်စုနှောင်းပိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="57.557" dur="0.167"> အရှေ့ ST ။ Bernard ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ဒီနေ့နှောင်းပိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="57.724" dur="0.033"> အရှေ့ ST ။ နေ့လည်ခင်း BERNARD ဒီနေ့နှောင်းပိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.134"> အရှေ့ ST ။ BERNARD စီရင်စုတစ်စုကဒီနေ့နှောင်းပိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="57.891" dur="0.1"> အရှေ့ ST ။ BERNARD စီရင်စုတစ်စုပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနှောင်းပိုင်းတွင်ခိုင်မာတဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="57.991" dur="0.067"> အရှေ့ ST ။ BERNARD ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်နိမိတ်ပြီးနောက်နေ့လည်ခင်း၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မုန်တိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="58.058" dur="0.233"> နေ့လည်ခင်း၌ဒီနည်းကိုအားကြီးသောမုန်တိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.067"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုတစ်အားကြီးသောမုန်တိုင်းထန်</text>
<text sub="clublinks" start="58.358" dur="0.2"> နေ့ပြီးနောက်ဒီနည်းကနေခိုင်မာတဲ့မုန်တိုင်းထိတ်လန့်</text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.1"> နေ့ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းကနေခိုင်မာတဲ့မုန်တိုင်းထိတ်လန့်</text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.067"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုတစ်ရာသီလုံးသဲသောင်ကနေခိုင်မာတဲ့မုန်တိုင်းထိတ်လန့်</text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.233"> Hurry ထံမှ SURGE</text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="2.47"> Hurric RANDHURY OF SURGE</text>
<text sub="clublinks" start="61.428" dur="0.1"> ရီရီ SURGE မှ SURGE ထဲသို့တဟုန်တည်းပြေး</text>
<text sub="clublinks" start="61.528" dur="0.133"> SANDY ထံမှ SURGE SANDY အလျင်အမြန်ပြေး</text>
<text sub="clublinks" start="61.661" dur="0.1"> SURY OF SURGE RANDED ထဲသို့ယူ။ ယူ</text>
<text sub="clublinks" start="61.761" dur="0.1"> SURYR ထံမှ SURGE Rush ထဲသို့ယူ။ ထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="61.861" dur="0.067"> SANDY ထံမှ SURGE SANDY အလျင်အမြန်နှင့်ထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.234"> အလျင်အမြန်နှင့်ထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.066"> စီးအလျင်အမြန်စီးရီးထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.1"> ထဲသို့အလျင်အမြန်ပြေး၏စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.134"> အလျင်အမြန် RING စီးရီးထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="62.462" dur="0.1"> အလျင်အမြန်ပြေးနှင့်ကွင်းလေယာဉ်စီးရီးထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="62.562" dur="0.067"> သို့အလျင်အမြန်ပြေးနှင့်ကွင်း၏စီးရီးထဲကယူ</text>
<text sub="clublinks" start="62.629" dur="0.267"> RING LEVEES စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="62.896" dur="0.1"> ထောက်ပံ့ပေးသော RING LEVE စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.2"> အချို့သောထောက်ပံ့ပေးသော RING LEVE စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.033"> အချို့အကာအကွယ်ပေးသောကွင်းလေယာဉ်စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="63.229" dur="2.269"> အချို့အကာအကွယ်ပေးပေးသောကြိုး၏စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="65.498" dur="0.067"> အချို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသော Ring လေယာဉ်စီးရီး</text>
<text sub="clublinks" start="65.565" dur="0.2"> တချို့ရဲ့ကာကွယ်မှုပေး</text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.167"> ကန်အချို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="65.932" dur="0.1"> ကန် DELACROIX ၏အချို့ကာကွယ်မှုကိုပေးပါ</text>
<text sub="clublinks" start="66.032" dur="0.134"> ကန် DELACROIX TOရိယာများအတွက်အချို့ကာကွယ်မှုပေး</text>
<text sub="clublinks" start="66.166" dur="0.066"> ကန်တော်ကြီး Delacroix ဒေသများရှိအချို့သောကာကွယ်မှုများကိုပေးအပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="3.404"> LAKE Delacroix REရိယာစီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.233"> LAKE DELACROIX စီရင်စုနယ်ခေါင်းဆောင်များ</text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.034"> LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များ</text>
<text sub="clublinks" start="69.903" dur="0.133"> LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များ</text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.067"> LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များကိုဆန်းစစ်ရန်</text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.067"> LAKE DELACROIX နယ်မြေရှိစီရင်စုနယ်ရှိခေါင်းဆောင်များကိုဆန်းစစ်ရန်</text>
<text sub="clublinks" start="70.17" dur="0.233"> အကဲဖြတ်ဖို့ ဦး ဆောင်Aရိယာ</text>
<text sub="clublinks" start="70.403" dur="0.1"> ခေါင်းဆောင်များသည်ပျက်စီးမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်။</text>
<text sub="clublinks" start="70.503" dur="0.167"> ပျက်စီးခြင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="70.67" dur="0.067"> ပျက်စီးခြင်း။ >></text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.133"> ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်</text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.034"> ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်လိုအပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="70.904" dur="0.1"> ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.1"> ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်တစ် ဦး မြင့်မားလိုအပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.067"> ပျက်စီးခြင်း။ >> သင်မြင့်မားသောရေလိုအပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.267"> >> သင်မြင့်မားသောရေလိုအပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="71.438" dur="0.033"> >> သင်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="71.471" dur="0.1"> >> သင်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="71.571" dur="2.202"> >> သင်ရရှိရန်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="73.773" dur="0.1"> >> သင်လှည့်ပတ်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.134"> >> သင်ပတ်ပတ်လည်အစိတ်အပိုင်းများရရန်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="74.007" dur="0.1"> >> သင်အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရှိရန်မြင့်မားသောရေယာဉ်လိုအပ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="74.107" dur="0.2"> ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်သို့ယာဉ်</text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.134"> ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။</text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.133"> ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="74.574" dur="0.133"> ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ Bernard စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.067"> ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ အပြင်ဘက် BERNARD စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="74.774" dur="0.067"> ST ၏အစိတ်အပိုင်းများပတ်ပတ်လည်ရရန်ယာဉ်။ အပြင်ဘက်မှာခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်</text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.234"> ST ။ အပြင်ဘက်မှာခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်</text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.2"> ST ။ Lever အပြင်ဘက်မှာ BERNARD စီရင်စု</text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.133"> ST ။ Lever ကာကွယ်ရေးအပြင်ဘက် BERNARD စီရင်စု</text>
<text sub="clublinks" start="75.408" dur="0.067"> ST ။ တနင်္လာနေ့တွင်လေဒီယိုပြင်ပပြင်ပရှိ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="75.475" dur="0.3"> အင်္ဂါနေ့လေဝိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး</text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.1"> မွန်းလွဲပိုင်းတွင်လေကြောင်းကာကွယ်မှုနေ့လည်။</text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="2.036"> နေ့လည်</text>
<text sub="clublinks" start="77.911" dur="0.167"> နေ့လည် THE</text>
<text sub="clublinks" start="78.078" dur="0.1"> နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.178" dur="0.133"> နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်းမလည်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.067"> နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလည်းရေလွှမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.378" dur="0.067"> နေ့လည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလည်းထွက်ရေလွှမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.445" dur="0.2"> အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလည်းထွက်ရေလွှမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.2"> အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေလည်းရေလွှမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.845" dur="0.033"> အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်လည်းမီးဖိုချောင်မှထွက်လာသည်</text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.167"> အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်မီးဖိုချောင်မှစီးထွက်လာသည်</text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.067"> အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်စည်ပင်သာယာမှ HOPEDALE သို့စီးထွက်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.067"> အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည်စည်ပင်သာယာမှ HOPEDALE သို့လည်းကောင်း၊</text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.233"> FLOURISANT မှ HOPEDALE သို့၎င်း၊</text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="3.37"> FLOURISANT မှသည် HOPEDALE သို့၎င်း၊</text>
<text sub="clublinks" start="82.782" dur="0.134"> FLOURISANT မှ HOPEDALE သို့သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေ။</text>
<text sub="clublinks" start="82.916" dur="0.2"> Shell ကမ်းခြေ။</text>
<text sub="clublinks" start="83.116" dur="0.133"> Shell ကမ်းခြေ။ ST ။</text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="0.134"> Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="83.383" dur="0.167"> Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ Bernard စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="83.55" dur="0.066"> Shell ကမ်းခြေ။ ST ။ BERNARD စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.201"> ST ။ BERNARD စီရင်စုနယ်</text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="0.166"> ST ။ BERNARD စီရင်စု GUY</text>
<text sub="clublinks" start="83.983" dur="0.101"> ST ။ BERNARD စီရင်စု GUY MCGINNIS</text>
<text sub="clublinks" start="84.084" dur="0.066"> ST ။ Bernard စီရင်စု GUY MCGINNIS ပြောဆိုသည်</text>
<text sub="clublinks" start="84.15" dur="0.1"> ST ။ Bernard စီရင်စုနယ်ဥက္ကဌ GUY MCGINNIS ကဆိုသည်</text>
<text sub="clublinks" start="84.25" dur="0.1"> ST ။ Bernard စီရင်စုနယ်ဥက္ကဌ GUY MCGINNIS အိုင်တီကြည့်သည်ဟုဆိုသည်</text>
<text sub="clublinks" start="84.35" dur="0.067"> ST ။ BERNARD စီရင်စုနယ် GUY MCGINNIS အိုင်တီကဲ့သို့ပုံရသည်</text>
<text sub="clublinks" start="84.417" dur="0.2"> GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အလား</text>
<text sub="clublinks" start="84.617" dur="2.303"> GUY MCGINNIS အိုင်တီဆိုသူ SALLY ကဲ့သို့ပင်ကြည့်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.1"> GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရာသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ပုံစံဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.02" dur="0.133"> GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရာသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသောအခြေအနေကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.067"> GUY MCGINNIS အိုင်တီဆိုသည့်အရာသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်လှိုင်းထန်ပုံလိုပင်ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.22" dur="0.167"> GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရာသည်အလွန်ပြင်းထန်သောလှိုင်းလုံးကြီးကဲ့သို့ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.387" dur="0.067"> GUY MCGINNIS အိုင်တီပြောသည့်အရ SALY Storm Surge မြင့်တက်မည့်ပုံရသည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.454" dur="0.166"> Sally Storm Surge ထွက်ပေါ်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.62" dur="0.1"> Sally Storm Surge ထွက်ပေါ်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.72" dur="0.101"> Sally Storm SURGE သည်အမြင့်ဆုံးရောက်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.1"> SALLY STORM SURGE ခုနစ်ခုတွင်အမြင့်ဆုံးလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="87.921" dur="0.133"> Sally Storm Surge သည်ခုနစ်ပေခန့်အကွာတွင်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="88.054" dur="0.067"> SALY STORM SURGE မတိုင်မှီခုနစ်ခုမြောက်ခြေမချမီတွင်ရှိလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="88.121" dur="0.233"> ရှေ့တော်၌ခုနစ်ခြေမတိုင်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="88.354" dur="0.167"> မစတင်မီခုနစ်ခုမြောက်ခြေထောက်တွင်မဖြည့်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="88.521" dur="0.1"> ယနေ့ညမတိုင်မီခုနစ်ပါးသောခြေထောက်တွင်ယနေ့ည။</text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> ယနေ့ည။</text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.066"> ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="88.888" dur="0.1"> ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="88.988" dur="0.101"> ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ရေ</text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="1.968"> ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ရေနိုင်</text>
<text sub="clublinks" start="91.057" dur="0.067"> ယနေ့ည။ ဒါပေမဲ့ရေကိုကပ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="91.124" dur="0.233"> ဒါပေမဲ့ရေကိုကပ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="91.357" dur="0.067"> သို့သော်ရေလှည့်ပတ်လှည့်ပတ်နိုင်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="91.424" dur="0.1"> သို့သော်ရေလှည့်ပတ်လှည့်ပတ်နိုင်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="91.524" dur="0.1"> သို့သော်ရေသည်ရက်များတစ်လျှောက်ဝန်းရံထားသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.167"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။</text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.1"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ WE</text>
<text sub="clublinks" start="91.891" dur="0.1"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ကြှနျုပျတို့လုပျနိုငျမညျ</text>
<text sub="clublinks" start="91.991" dur="0.101"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ငါတို့နေမှာပါ</text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.166"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ကျနော်တို့ဆဲလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="92.258" dur="2.937"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> နေ့ရက်ကာလပတ်လည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား</text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား</text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်တီကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="95.662" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်တီကဲ့သို့ကြည့်ရှုမည်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်အိုင်တီအမြင့်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီရေဒီယိုကဲ့သို့သောပုံပေါ်လိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်ရှိလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.267"> ဒီရေကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမည်</text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.133"> ဒီရေအမြင့်ဆုံးဒီရေကဲ့သို့ကြည့်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.1"> ဒီရေဒီယိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်ခန့်မှန်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.1"> ဒီရေဒီယိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="96.529" dur="0.067"> ဒီရေအမြင့်ဆုံးဒီပုံကိုကြည့်ပြီးဒီနေရာမှာသုံးခုလောက်ရှိနေမှာပါ</text>
<text sub="clublinks" start="96.596" dur="0.067"> ဒီရေသည်မြင့်သောဒီရေကဲ့သို့ပင်သုံးနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကြည့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.167"> ဖြစ်ကောင်းသုံးပတ်ပတ်လည် AND</text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.1"> သုံးယောက်နှင့်တစ်ဝိုက်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.1"> သုံးယောက်နှင့်တစ်ဝက်ခန့်ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="97.03" dur="0.067"> သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်တစ်ဝက်ခြေ</text>
<text sub="clublinks" start="97.097" dur="0.033"> သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်တစ်ဝက်ခြေအဘို့</text>
<text sub="clublinks" start="97.13" dur="2.135"> သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်တစ် ဦး အတွက်တစ်ဝက်ခြေမ</text>
<text sub="clublinks" start="99.265" dur="0.134"> သုံးယောက်ခန့်နှင့်တစ် ဦး အတွက်တစ်ဝက်ခြေတစ်ဖက်</text>
<text sub="clublinks" start="99.399" dur="0.067"> သုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်နှင့်ရက်ပေါင်းများစွာတစ်ဝက်ခြေမ</text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.233"> စုံတွဲတစ်ရက်တစ်ဝက်ခြေထောက်</text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.067"> မတိုင်မီရက်ပေါင်းများစွာအတွက်တစ်နာရီဝက်</text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.133"> ဒီနေ့မတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွက်တစ်ဝက်အစာ</text>
<text sub="clublinks" start="99.899" dur="0.067"> ဒီရေမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွက်တစ်ဝက်ခြေတစ်ဖက်</text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.067"> ဒီရေကိုမတတ်နိုင်မီရက်ပေါင်းများစွာအတွက်တစ်နာရီဝက်ပေ</text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.133"> ဤရေသည်မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်တစ်ဝက်ခြေထောက်</text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="0.067"> ဒီရေကနစ်မြုပ်မခံရမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်ဝက်တစ်ခွက်</text>
<text sub="clublinks" start="100.233" dur="0.2"> ဒီရေမနုပ်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="100.433" dur="0.067"> ဒီရေမနုပ်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="100.5" dur="0.1"> ဒီရေမနုပ်မီ</text>
<text sub="clublinks" start="100.6" dur="0.1"> ဒီရေမနုပ်မီဒီမှာ။</text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.167"> ထဲကဒီမှာ။</text>
<text sub="clublinks" start="100.867" dur="0.1"> ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="0.134"> ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံ</text>
<text sub="clublinks" start="101.101" dur="0.066"> ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံမူတည်</text>
<text sub="clublinks" start="101.167" dur="0.067"> ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံမူတည်</text>
<text sub="clublinks" start="101.234" dur="2.069"> ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီ့မူတည်</text>
<text sub="clublinks" start="103.303" dur="0.066"> ထဲကဒီမှာ။ အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.167"> အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုမုန်တိုင်းဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="103.636" dur="0.067"> အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်မူတည်။ မည်မျှမြန်</text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.1"> အိုင်တီလျင်မြန်စွာအိုင်တီလျင်မြန်စွာဘယ်လိုမူတည်အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.067"> အိုင်တီရုံမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်အိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့</text>
<text sub="clublinks" start="103.87" dur="0.133"> အိုင်တီလျင်မြန်စွာအိုင်တီသို့ပြောင်းရွှေ့ဘယ်လိုမုန်တိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.234"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။</text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.133"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="104.37" dur="0.134"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ မရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="104.504" dur="0.033"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာပေါ်လာပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.1"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာပေါ်လာပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အဲဒီမှာပေါ်လာဖို့မသွားဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.067"> ဘယ်လိုအိုင်တီလျင်မြန်စွာရွှေ့။ အများကြီးဖြစ်ဖို့မပေါ်ခဲ့ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="104.804" dur="0.267"> အများကြီးဖြစ်ဖို့မပေါ်ခဲ့ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> အများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့မပေါ်ခဲ့ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.066"> အများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးစေခြင်းငှါမပေါ်ခဲ့ပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="105.271" dur="0.067"> အများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးယိုယွင်းဖို့မထင်ရှားပါဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="2.035"> ST ၌ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာပျက်စီးခြင်းကိုမတွေ့ရပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="107.373" dur="0.067"> ST ၌ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာပျက်စီးခြင်းကိုမတွေ့ရပါ။ BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="107.44" dur="0.167"> ST တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးခြင်း BERNARD</text>
<text sub="clublinks" start="107.607" dur="0.067"> ST တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးခြင်း BERNARD ။</text>
<text sub="clublinks" start="107.674" dur="0.233"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.067"> ။ လူထု</text>
<text sub="clublinks" start="107.974" dur="0.1"> ။ WHO က</text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.134"> ။ အသက်ရှင်သော WHO က</text>
<text sub="clublinks" start="108.208" dur="0.066"> ။ အပြင်မှာနေတဲ့ WHO ကလူ</text>
<text sub="clublinks" start="108.274" dur="0.067"> ။ အပြင်မှာနေထိုင် WHO က</text>
<text sub="clublinks" start="108.341" dur="0.234"> အပြင်မှာနေထိုင် WHO က</text>
<text sub="clublinks" start="108.575" dur="0.166"> အပြင်ဘက်မှာနေတဲ့ WHO ကလူ</text>
<text sub="clublinks" start="108.741" dur="0.101"> အပြင်ဘက်မှာနေတဲ့ WHO ကလူတွေ</text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="0.033"> အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများသည် LEVEE PROTECTION KNOW</text>
<text sub="clublinks" start="108.875" dur="0.1"> အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများသည်သိထားသည့် LEVEE PROTECTION</text>
<text sub="clublinks" start="108.975" dur="0.067"> အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများသည်ရွှေ့ပြောင်းရမည်ကိုသိထားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="109.042" dur="0.233"> ပြောင်းရွှေ့ဖို့ KNOW LEVEE ကာကွယ်မှု</text>
<text sub="clublinks" start="109.275" dur="0.167"> LEVEE PROTEZZJONI သည်၎င်းတို့ကိုရွှေ့ရန်သိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="109.442" dur="0.034"> LEVEE PROTEZZJONI သည်သူတို့၏တန်ဖိုးများကိုရွေ့လျားရန်သိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="1.968"> LEVEE PROTEZZJONI သည်သူတို့၏တန်ဖိုးများကိုရွေ့လျားရန်သိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="111.444" dur="0.067"> LEVEE PROTEZZJONI သည်သူတို့၏တန်ဖိုးများကိုပိုမိုမြင့်မားစေရန်ရွေ့လျားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="111.511" dur="0.233"> ပိုမိုမြင့်မားဖို့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုး</text>
<text sub="clublinks" start="111.744" dur="0.067"> ပိုမိုမြင့်မားမြေသို့၎င်းတို့၏တန်ဖိုး</text>
<text sub="clublinks" start="111.811" dur="0.1"> ပိုမိုမြင့်မားမြေသို့၎င်းတို့၏တန်ဖိုးများနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="111.911" dur="0.034"> ပိုမိုမြင့်မားသောမြေပြင်နှင့်လှေများ၎င်းတို့၏တန်ဖိုး</text>
<text sub="clublinks" start="111.945" dur="0.1"> ပိုမိုမြင့်မားသောမြေပြင်နှင့်လှေများ၎င်းတို့၏တန်ဖိုး</text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.133"> ပိုမိုမြင့်မားသောမြေပြင်နှင့်လုံခြုံရန်လှေများ၎င်းတို့၏တန်ဖိုး</text>
<text sub="clublinks" start="112.178" dur="0.067"> ပိုမိုမြင့်မားသောမြေကြီးနှင့်၎င်းတို့၏လုံခြုံမှုရှိသောဆိပ်ကမ်းမှလှေများအတွက်၎င်းတို့၏တန်ဖိုး</text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.167"> ဆိပ်ကမ်းမှလုံခြုံရန်မြေနှင့်လှေ</text>
<text sub="clublinks" start="112.412" dur="0.067"> ဆိပ်ကမ်းမှလုံခြုံရန်မြေနှင့်လှေ။</text>
<text sub="clublinks" start="112.479" dur="0.2"> ။</text>
<text sub="clublinks" start="112.679" dur="0.066"> ။ အများဆုံး</text>
<text sub="clublinks" start="112.745" dur="0.067"> ။ အများစု</text>
<text sub="clublinks" start="112.812" dur="0.1"> ။ အများစု</text>
<text sub="clublinks" start="112.912" dur="0.067"> ။ အိမ်များဆုံး</text>
<text sub="clublinks" start="112.979" dur="0.1"> ။ အိမ်အများစုမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="113.079" dur="0.067"> ။ အိမ်အများစုသည်လည်း</text>
<text sub="clublinks" start="113.146" dur="0.233"> အိမ်အများစုသည်လည်း</text>
<text sub="clublinks" start="113.379" dur="0.101"> အိမ်အများစုသည်လည်းထမြောက်ကြသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="2.202"> ထခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="115.682" dur="0.133"> ထခဲ့သည် ပင်</text>
<text sub="clublinks" start="115.815" dur="0.1"> ထခဲ့သည် သော်လည်း</text>
<text sub="clublinks" start="115.915" dur="0.067"> ထခဲ့သည် Sally သျောလညျး</text>
<text sub="clublinks" start="115.982" dur="0.134"> ထခဲ့သည် OU တောင်မှထင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="116.116" dur="0.066"> ထခဲ့သည် OU S S S ။ ။ ။ ။ EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV S THOU THOU THOU TH S SOU SALLALLALL S SALLALLALLALLALLALLALLALL ALLALL TH ALL EVALL ALLALLALL ALLALL S S ALL ALLALL S S ALL ALLALL ALL S ALL ALLALL ALLALL ALL S ALL S S ISALL ALL S ALL S ALL S OU S ALL S ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL SALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL SALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL S S ALL S IS S IS S IS S ALL S ALL SALL ယခုပင်လျှင်ဆောင်ရွက်ရမည်</text>
<text sub="clublinks" start="116.182" dur="0.267"> OU S S S ။ ။ ။ ။ EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV S THOU THOU THOU TH S SOU SALLALLALL S SALLALLALLALLALLALLALLALL ALLALL TH ALL EVALL ALLALLALL ALLALL S S ALL ALLALL S S ALL ALLALL ALL S ALL ALLALL ALLALL ALL S ALL S S ISALL ALL S ALL S ALL S OU S ALL S ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL ALLALL SALL SALL ALLALL SALL ALLALL ALLALL SALL ALLALL SALL ALLALL SALL SALL SALL SALL ALLALL ALLALL S S ALL S IS S IS S IS S ALL S ALL SALL ယခုပင်လျှင်ဆောင်ရွက်ရမည်</text>
<text sub="clublinks" start="116.449" dur="0.034"> ယခုပင်လျှင် SALLY ယခုမျှော်လင့်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="116.483" dur="0.1"> ယခုပင်လျှင် SALLY ယခုမျှော်လင့်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="116.583" dur="0.166"> ယခုပင်လျှင် SALLY ယခုပင်မျှော်လင့်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.101"> ယခုပင် SALLY ယခုပင်မျှော်လင့်နိုင် LANDFALL</text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.066"> ယခုပင်အနည်းငယ်သာ LANDFALL အနီးတွင်ရှိရန်မျှော်လင့်နေကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="116.916" dur="0.201"> အနီးဆုံး LANDFALL စေရန်မျှော်လင့်</text>
<text sub="clublinks" start="117.117" dur="0.133"> အနီးရှိ LANDFALL စေရန်မျှော်လင့်</text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.133"> FLORIDA အနီးတွင် LANDFALL လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="117.383" dur="2.269"> FLORIDA Alabama အနီး LANDFALL လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထား</text>
<text sub="clublinks" start="119.652" dur="0.167"> FLORIDA ALABAMA LINE အနီးတွင် LANDFALL ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="119.819" dur="0.067"> FLORIDA ALABAMA LINE အနီးတွင် LANDFALL ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.2"> FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="120.086" dur="0.1"> FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="120.186" dur="0.1"> FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="120.286" dur="0.201"> FLORIDA Alabama လိုင်း, အိုင်တီအလွန်ဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="120.487" dur="0.066"> ဖလိုရီဒါအလက်ဇန္ဒား LINE, အိုင်တီအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="120.553" dur="0.067"> ဖလိုရီဒါအလက်ဇန္ဒား LINE သည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="120.62" dur="0.2"> အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="120.82" dur="0.1"> THE အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="120.92" dur="0.201"> ဒေသခံဒေသခံများအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.133"> ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.1"> ဒေသခံစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.267"> ဒေသခံစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="121.621" dur="0.1"> ဒေသခံစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း။</text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.167"> စက်မှုလုပ်ငန်း။</text>
<text sub="clublinks" start="121.888" dur="2.002"> စက်မှုလုပ်ငန်း။ က</text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.133"> စက်မှုလုပ်ငန်း။ Shrimp</text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.101"> စက်မှုလုပ်ငန်း။ Shrimp ရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="124.124" dur="0.2"> စက်မှုလုပ်ငန်း။ SHRIMP ရာသီငါ</text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> စက်မှုလုပ်ငန်း။ ငါနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ Shrimp ရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> ငါနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ Shrimp ရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.1"> သင်တို့ကိုငါနားလည်သောရေမွှေးရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.033"> ငါနားလည်တဲ့ရေပုစွန်ရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="124.724" dur="0.134"> သင်၌နားလည်မှုအနိမ့်ဆုံးရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="124.858" dur="0.1"> ငါနားလည်တဲ့ရေပုလင်းတစ်ချောင်း</text>
<text sub="clublinks" start="124.958" dur="0.133"> ငါနားလည်တဲ့ရေတိုဆောင်းရာသီသင့်မှာကောင်းမွန်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="125.091" dur="0.1"> ငါကောင်းတဲ့ရာသီရှိတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်တဲ့နိမ့်ကျတဲ့ရာသီ။</text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.2"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.101"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ THE</text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်း</text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.133"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီ</text>
<text sub="clublinks" start="125.825" dur="0.1"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီဥတုသည်အဆင်းလှသည်</text>
<text sub="clublinks" start="125.925" dur="0.067"> သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်။ ကဏန်းရာသီသည်အလွန်ကောင်းသည်</text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.234"> ကဏန်းရာသီသည်အလွန်ကောင်းသည်</text>
<text sub="clublinks" start="126.226" dur="0.1"> ကဏန်းရာသီသည်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုဖြစ်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="1.468"> ရာသီ။</text>
<text sub="clublinks" start="127.794" dur="0.133"> ရာသီ။ မင်း</text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.134"> ရာသီ။ သင်ရုံ</text>
<text sub="clublinks" start="128.061" dur="0.1"> ရာသီ။ သင်ရုံမြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> ရာသီ။ သင်ရုံပုံရိပ်ယောင်</text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.1"> ရာသီ။ သင်မည်သို့အိုင်တီမြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="128.361" dur="0.067"> ရာသီ။ သင်ရုံအိုင်တီဘယ်လိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.233"> သင်ရုံအိုင်တီဘယ်လိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.1"> သင်ရုံဘယ်လိုပိတ်ထားပုံကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.101"> သူတို့ဘယ်လိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="128.862" dur="0.2"> သူတို့့ပုံကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.067"> သူတို့ရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးဘယ်လိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="129.129" dur="2.702"> သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="4.638"> သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပိတ်ထားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.067"> သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.233"> ချ AND</text>
<text sub="clublinks" start="136.769" dur="0.067"> ချ AND အဆင့်</text>
<text sub="clublinks" start="136.836" dur="0.067"> ချ AND LEVEES</text>
<text sub="clublinks" start="136.903" dur="0.1"> ချ AND LEVEES</text>
<text sub="clublinks" start="137.003" dur="0.1"> ချ AND THE သစ်သားသစ်သား</text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="2.87"> ချ AND THE သစ်သားရေကန်ထဲမှာလေ</text>
<text sub="clublinks" start="139.973" dur="0.066"> ချ AND THE Woodwood Lake Delices</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.201"> THE Wood Lake Delices ရှိငှားရမ်း</text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> Wood ကကန် Delicto INရိယာထဲမှာလေ</text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.066"> တောင်ကုန်း Delicto INရိယာထဲမှာလေ</text>
<text sub="clublinks" start="140.406" dur="0.101"> တောင်ကုန်း Delicto INရိယာ၌သစ်တောယခုပင်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.2"> ဒီရေကန်ကန် Delicto DELရိယာ၌လေယာဉ်အခုအချိန်မှာပါပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.066"> Woodwood Lake Delices ရှိငှားရမ်းခများယခုထက်ကျော်လွန်သွားပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.167"> အခုအချိန်မှာကျော်သွားပြီREရိယာ</text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.067"> အခုအချိန်မှာကျော်သွားပြီBYရိယာ BY</text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.1"> အခုဆိုရင်နေရာOရိယာကျော်ဖြတ်</text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.1"> ယခုအချိန်တွင်ရိယာမုန်တိုင်းထန်နေပြီ</text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="2.903"> အခုအချိန်မှာOရိယာမုန်တိုင်းထန်သော SURGE အားဖြင့်</text>
<text sub="clublinks" start="144.11" dur="0.067"> OCရိယာယခုအချိန်တွင်ကျော်လွှားပြီမုန်တိုင်းဒီရေလှိုင်းများက</text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.2"> ဆက်နွယ်နေသောမုန်တိုင်း Surge BY</text>
<text sub="clublinks" start="144.377" dur="0.167"> နှင့်ပေါင်းသင်းသောမုန်တိုင်း Surge BY</text>
<text sub="clublinks" start="144.544" dur="0.1"> အပူချိန် SURRICANE ဖြင့်ဖွဲ့စည်း</text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.1"> Sally SURRICANE နှင့်အတူဆက်နွယ်နေသောမုန်တိုင်း Surge အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။</text>
<text sub="clublinks" start="144.744" dur="0.167"> Sally Hurricane အတူ။</text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> Sally Hurricane အတူ။ >></text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.066"> Sally Hurricane အတူ။ >> AND</text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.101"> Sally Hurricane အတူ။ >> AND WE</text>
<text sub="clublinks" start="145.145" dur="0.066"> Sally Hurricane အတူ။ >> AND WE ့</text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.067"> Sally Hurricane အတူ။ >> AND ငါတို့ပဲမြင်</text>
<text sub="clublinks" start="145.278" dur="2.97"> Sally Hurricane အတူ။ >> AND ကျနော်တို့့တစ် ဦး ကိုမြင်</text>
<text sub="clublinks" start="148.248" dur="0.066"> Sally Hurricane အတူ။ >> AND ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်တစင်းကိုမြင်</text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.201"> >> AND ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်တစင်းကိုမြင်</text>
<text sub="clublinks" start="148.515" dur="0.166"> >> AND ကျနော်တို့ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းပဲမြင်</text>
<text sub="clublinks" start="148.681" dur="0.1"> >> AND ကျနော်တို့ပဲရဟတ်ယာဉ်ကိုမြင်ပျံသန်း overhead ။</text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.167"> ကျော်ပျံသန်း။</text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.067"> ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီ</text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.1"> ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီရှိခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="149.115" dur="0.1"> ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ်ခုလုံးရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="149.215" dur="0.067"> ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်</text>
<text sub="clublinks" start="149.282" dur="0.1"> ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ် ဦး စလုံးပြည်နယ်နှင့်ရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.067"> ကျော်ပျံသန်း။ အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="149.449" dur="2.869"> အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="152.318" dur="0.1"> အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရုံးများရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="152.418" dur="0.134"> အိုင်တီနှစ်ခုလုံးပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံရုံးများရှိခဲ့ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="152.552" dur="0.1"> အိုင်တီနှစ်ခုလုံးတွင်နိုင်ငံပိုင်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာရုံးများရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.133"> အိုင်တီနှစ်ခုလုံးတွင်စီးဆင်းနေသောပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာရုံးများရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="152.785" dur="0.067"> အိုင်တီနှစ်ခုလုံးတွင်စီးဆင်းနေသောပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာရုံးများရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="152.852" dur="0.234"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများ</text>
<text sub="clublinks" start="153.086" dur="0.033"> အဲဒီမှာကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများ</text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.1"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများအဲဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.034"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများယူအဲဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="153.253" dur="0.1"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများတစ် ဦး ကယူအဲဒီမှာ</text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.066"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများတစ် ဦး ကြည့်ရှုရန်</text>
<text sub="clublinks" start="153.419" dur="0.134"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများကြည့်ရှုရန် AND</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.067"> ကျော်စီးဆင်းနေသောအရာရှိများတစ် ဦး ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့</text>
<text sub="clublinks" start="153.62" dur="0.2"> ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့ရှိပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="153.82" dur="0.133"> တစ် ဦး ကိုကြည့်ယူ။ အကဲဖြတ်</text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.1"> တစ် ဦး ကိုကြည့်ယူ။ ပျက်စီးမှုအကဲဖြတ်ရန်။</text>
<text sub="clublinks" start="154.053" dur="0.201"> ပျက်စီးခြင်း။</text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="2.202"> ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="156.456" dur="0.167"> ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="156.623" dur="0.166"> ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကောင်လေး</text>
<text sub="clublinks" start="156.789" dur="0.134"> ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS,</text>
<text sub="clublinks" start="156.923" dur="0.067"> ပျက်စီးခြင်း။ ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, THE</text>
<text sub="clublinks" start="156.99" dur="0.233"> ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, THE</text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.167"> ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, စီရင်စု</text>
<text sub="clublinks" start="157.39" dur="0.1"> ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, စီရင်စုနယ်သမ္မတ</text>
<text sub="clublinks" start="157.49" dur="0.1"> ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတ</text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.067"> ဒါပေမဲ့အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတကပြောကြားခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.067"> ဒါပေမယ့်အစောပိုင်း GUY MCGINNIS, ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတကဒီမှာပြောခဲ့တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="157.724" dur="0.233"> Parish သမ္မတဒီမှာပြောခဲ့တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="157.957" dur="0.067"> Parish သမ္မတဒီမှာအမေရိကန်ကိုးကားပြောကြားခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.1"> ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်သမ္မတကဒီမှာပြောခဲ့တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="158.124" dur="0.1"> Parish သမ္မတဒီမှာအမေရိကန်ကိုးကားအိုင်တီကြည့်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="158.224" dur="2.469"> ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ဥက္ကUS္ဌကအိုင်တီနဲ့တူတယ်</text>